Konke Odinga Ukukwazi Ngokukhwabanisa | Izinkampani Zomthetho eDubai
Konke Odinga Ukwazi Ngokukhwabanisa
Ukukhwabanisa akuyona nje inkinga yobugebengu, kepha futhi kuyindaba yomphakathi. Inkohliso yobugebengu iyashushiswa kanti umphumela wayo kungaba isikhathi sejele. Inhloso ejwayelekile yokukhwabanisa ukukhwabanisa abantu noma amaqembu emali noma izinto ezibalulekile, kepha kwesinye isikhathi inkohliso yobugebengu nayo ifaka ukwamukela izinzuzo ngemali eyebiwe noma izinto ezibalulekile.
Kuyini ukukhohlisa? Ukuchazwa Kwezomthetho
ihlose ukukhohlisa noma ukuphamba isisulu
Ukukhwabanisa kusho ukumela iqiniso elingamanga noma ukusetshenziswa kwamagama noma ekuziphatheni. Okunye futhi okubhekwe njengenkohliso ukukhwabanisa okukhohlisayo kanye nokufihlwa kwamaqiniso okufanele adalulwe. Ukukhwabanisa ukhohlisa ngamabomu ngenhloso yokuthola inzuzo noma inzuzo engekho emthethweni.
Ukukhwabanisa kuza ngezinhlobonhlobo ezahlukahlukene, okunye okunjengokweba ukuqamba amanga kuvamile kanti abanye bahlukunyezwa izisulu ezinjengokukhwabanisa kwasebhange, inkohliso yomshuwalense, noma ukuphamba. Ngenkathi izithako zokukhwabanisa zishiyana, izakhi zokugweba umuntu okhohlisayo zibandakanya:
Inhloso yokukhohlisa noma yokuqola isisulu ngokusebenzisa ukumelwa kwamanga, noma
Inhloso yokuncenga isisulu ukuthi sikhulule impahla ngenkathi sincike emifanekisweni yomenzi wobubi.
Ukuqonda Ubunikazi Bokweba Nokukhwabanisa
Kuyini Ukukhwabanisa Ubunikazi
Ukweba ubunikazi akuyona into entsha. Kudala njengenkathi uqobo lwayo. Eqinisweni, kunezindaba ezakha izinsuku zeWild West zabashokobezi zokubulala abantu nokuthatha omazisi babo, zibasize bagweme umthetho.
Namuhla, ubuchwepheshe bukwenze kwaba lula ukuthi izigebengu zilubambe kalula. Ukugenca izinhlangano zangasese nezikahulumeni nokuntshontsha imininingwane yomuntu ngezigidi uma usuhamba. Babese benza ubugebengu ngemininingwane eyebiwe. Izigebengu zingantshontsha imininingwane yomuntu ngezindlela eziningi ezibandakanya:
Ukuphishingana: Izisulu ezihlosiwe zithunyelwa nge-imeyili ngabakhwabanisi ngenhloso yokukhohlisa umemukeli ukuthi athathe isenzo esinganika izigebengu ukufinyelela olwazini lomuntu siqu.
I-Malware: AmaFraudsters akhohlisa izisulu ukuthi zilande isoftware yamahhala kusuka ku-inthanethi. Kodwa-ke, izisulu aziboni ukuthi i-software yamahhala ingafaka i-malware enobungozi enikeza izigebengu ukufinyelela kumakhompyutha noma amanethiwekhi aphelele.
Amanye amaqhinga: Izindlela ezimbili ezilula izigebengu ezingenza ngazo ukweba umazisi ukweba nge-imeyili kanye ne-dumpster diving. Lokhu kuvumela ukufinyelela kumadokhumenti angasetshenziswa ukweba ubunikazi babanye abantu.
Kuyini Ukukhwabanisa Ubunikazi?
Ukwebiwa kobunikazi nenkohliso ngokuyisisekelo kubhekisa ebugebengwini obufanayo. Kodwa-ke, umuntu angenza icala lokuthi ukukhwabanisa kungukusetshenziswa kwangempela kwemininingwane eyebiwe ngenzuzo yobugebengu. Uhlu olude lobugebengu bokukhwabanisa omazisi lufaka:
Ukukhwabanisa Ikhadi Lesikweletu: Lokhu kufaka phakathi ukusetshenziswa kwenombolo yekhadi lesikweletu lomuntu ukuthenga ngokuthenga ngenkohliso.
Umsebenzi noma ukukhwabanisa okuhlobene nentela: Lokhu kufaka phakathi ukusebenzisa inombolo yokuphepha yomunye umuntu neminye imininingwane yomuntu ukuthola umsebenzi wefayela nokubuyiselwa kwentela engenayo.
Ukukhwabanisa Kwebhange: Kusetshenziswa imininingwane yomuntu uma uthatha i-akhawunti yezezimali yomuntu noma yenhlangano noma ukuvula i-akhawunti entsha egameni lomunye umuntu.
Ucingo noma izinsiza. Vula umakhalekhukhwini noma i-akhawunti yokusebenzisa ulwazi lomuntu siqu.
Imali mboleko noma yokuqashisa: Oukufaka imalimboleko noma ukuqasha usebenzisa imininingwane yomuntu siqu.
Imibhalo kahulumeni noma izinzuzo zokukhwabanisa: Sebenzisa imininingwane yomuntu omunye umuntu ukuthola izinzuzo zikahulumeni.
Imithetho yokubamba ubunikazi kuyo yonke i-UAE imboza izinhlobo eziningi zokuziphatha. Kodwa-ke, okusemqoka kwabo yicala lokusebenzisa imininingwane ekhomba umuntu ngaphandle kwemvume noma imvume futhi ngenhloso yokuthola inzuzo. Kunezindlela eziningi ukweba umazisi okungenzeka:
Omunye untshontsha omunye isikhwama noma isikhwama semali ukuthola imininingwane yomuntu siqu namakhadi wesikweletu
Umuntu ongaziwa ubona umuntu elahla ikhadi lakhe, alithathe, bese enquma ukulisebenzisa ukuthenga okuthile.
Omunye untshontsha ilayisense lokushayela lomuntu alinikeze iphoyisa uma kwenzeka lidonswa ngejubane noma lapho liboshwa.
Othile uthumela i-imeyili ecela njengelungu le-IRS futhi ekuyala ukuthi uthumele imininingwane yakho ukuze ihlolwe.
Othile ufinyelela i-akhawunti yakho ye-imeyili futhi athole imininingwane eyimfihlo.
Omunye untshontsha i-imeyili yakho bese edlula ebhekela udoti efuna izikweletu noma izitatimende ezingaba nemininingwane yomuntu kanye nezinombolo ze-akhawunti.
"Ukukhwabanisa kulawula konke okwenziwayo"
Lesi simangalo esidala esingokomthetho sisho ukuthi lapho kwenzeka khona inkohliso, isenzo sezomthetho asikude. Lapho ukukhwabanisa kufinyelela ekhanda elibi, inketho ezingokomthetho zikhona, ukuthi umthetho othile awukho ezincwadini noma icala emthethweni ojwayelekile. Akunakwenzeka ngokomthetho ukuvuma ukukhwabanisa noma ubugebengu, akunakwenzeka ukwenza ngokuphelele ukuthengiselana okukhohlisayo. Ngaphezu kwalokho, ubufakazi bokuthi inkohliso ihlala yamukelwa enkantolo, noma ngabe loluhlobo lobufakazi ngeke lwamukelwe Kwezinye izimo.
Abameli Bokuqola Kwebhizinisi
Umthetho awubandlululi uma kukhulunywa ngabantu, ngakho-ke akufanele. Uma uhlangabezana nokukhwabanisa nganoma yiluphi uhlobo, kufanele uthintane nommeli ukuze uqonde ukuthi ukukhwabanisa kuwathinte kanjani amalungelo akho kanye nezibopho zakho.
Ngomqondo obanzi, ukukhwabanisa yinombolo yokuqala ezimakethe zamahhala. E-UAE, ukukhwabanisa kuthwala izinhlawulo zombango nezobugebengu. Uma omunye umuntu enza ubuqhetseba kuwe, kungenzeka bangabi nesikweletu kuwe, kepha banecala elibusayo kuhulumeni.
Uma ubhekene nesimo sokukhwabanisa, ungahlala uthatha izinyathelo zomthetho, noma ngabe kungekho mthetho oqondile osidingida kahle leso simo. Inkohliso yebhizinisi inezinhlobo ezintathu, okuyinkohlakalo eqinisweni, ukukhwabanisa ekubulaweni. nokukhwabanisa kuyindaba yomthetho.
Ukukhwabanisa eqinisweni, okwaziwa nangokuthi ukunxenxa kwenzeka lapho amagama wangempela wesivumelwano edukisa futhi eyindodana ngenxa yenhloso yokulahlekisa. Uma ummangalelwa eqonde iqiniso noma amaqiniso abalulekile, ngenhloso yokukudukisa, futhi ngomphumela, wenze ngokusezingeni elifanele ngokusekelwa kwalokhu kumelelwa okungafanele. Lokhu kubizwa njengokukhwabanisa eqinisweni. Ukubeka ngokusobala, kufanele ukuthi kwakukhona amanga mayelana nokuthile okubalulekile kusuka kummangaleli, kodwa washesha ukugwema ukukholwa amanga anjalo.
Ukukhwabanisa ekukhishweni yilapho ukuxhumana nokuxhumana kwamaqembu esivumelwaneni kungukungathembeki bese kudale into obekungafanele uyenze. Isibonelo, uma umuntu ecela i-autograph, kepha aqhubeke nokudweba inothi elibonisayo elizungeze i-autograph yakho, ibizwa ngokuthi ukukhwabanisa ekubulaweni.
Ubugebengu Bokukhwabanisa Nezimali
Ochwepheshe abaqinisekisiwe kanye nokuqinisekiswa okugcwele okugcwele